gynandromorphophilic ယောက်ျားဘယ်သူနည်း လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား (2015) နဲ့ Characterizing ယောက်ျား - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
comments: လိင်နှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း (လိင်အရပြောဆိုခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း) ကိုနှစ်သက်သောယောက်ျားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်ခွဲခြားမှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံများဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် လိင်တူဆက်ဆံသူသို့မဟုတ်ပင်ရိုးရိုး။
အဆိုပါသုတေသီများသည်ဤအရသာဖွံ့ဖြိုးဘာဖြစ်လို့မှနျးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်အများကြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်မိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အချိန်ကျော်ပိုပြီးတစ်ခုခုဝတ္ထုအဘို့အရှာဖွေရေးဤ fetish ဆောင်ခဲ့။ အတော်များများလည်းသတင်းပို့ porn ဖြတ်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွား.
ဒါ့အပြင် အိန္ဒိယသုတေသီများယောက်ျားနဲ့လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းဝယ်ယူအက်စ်တီအိုင်အဘို့အကုသခံယောက်ျားကသာ 26% လိင်တူချစ်သူဖြစ်သည်ထင်ရှားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာသည်အခြားအကြောင်းပြချက်များပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အထီးလိင်တူဆက်ဆံတဲ့အပြုအမူအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ / FirstView ဆောင်းပါး
Doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0033291715002317 (Doi အကြောင်း),9စာမျက်နှာများ။ အွန်လိုင်း Published: 26 အောက်တိုဘာလ 2015
KJ Hsua1 c1, AM Rosenthala1, DI Miller ကa1 နှင့် JM Baileya1
a1 စိတ်ပညာဌာန, Northwestern University, Evanston, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ
နောက်ခံသမိုင်း: Gynandromorphophilia (GAMP) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ပါတယ် gynandromorphs (GAMs; အသိအမှတ်ပြုထားသည့်, shemales) ။ GAMs ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပေါင်းစပ်ဝင်စား။ ထို့ကြောင့် GAMP ယောက်ျားကိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်၏သမားရိုးကျနားလည်မှုတစ်ခုစိန်ခေါ်မှုတင်ဆက် v။ အမျိုးသမီးပုံစံ။ GAMP ယောက်ျားအကြောင်းကိုထင်ကြေးသူတို့က, လိင်တူဆက်ဆံလိင်ကွဲ, ဒါမှမဟုတ်အထူးသဖြင့်, ရိုးရိုးသောစိတ်ကူးများပါဝင်သည်သိရသည်။
method ကို: ကျနော်တို့လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျား၏သူတို့နှင့်အတူ GAMP ယောက်ျား၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ငါတို့သည်လည်းလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၎င်းတို့၏ Self-ratings ပေါ်ဤအကြောင်းအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ရလဒ်များ: GAMP ယောက်ျားလိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျား၏ရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသူတို့နှင့်ဆင်တူ arousal ပုံစံများရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လိင်ကွဲလူတို့အားနှိုင်းယှဉ် GAMP ယောက်ျားအတော်လေးပိုပြီး GAM ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းအမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထက်ခဲ့ကြသည်။ GAMP ယောက်ျားကိုလည်း autogynephilia တစ်အတိုင်းအတာအပေါ်လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးထက်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
ကောက်ချက်: ရလဒ်များ GAMP ယောက်ျားလိင်တူဆက်ဆံသူမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားသည်။ သူတို့ကအစ GAMP ယောက်ျားအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူး eroticize ဖို့အထူးသဖြင့်များပါတယ်ကဖော်ပြသည်။
Key ကိုစကားလုံးများကို Autogynephilia; gynandromorphophilia; paraphilia; လိင်စိတ်နိုးထ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်; Transgender များ
c1 စာပေးစာယူဘို့နေရပ်လိပ်စာ: KJ Hsu, စိတ်ပညာဌာန, Northwestern University, 2029 Sheridan လမ်း, Evanston, IL 60208, USA ။ ။ (အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်])
တစ်လိင်တံဆက်ပြီးနေချိန်မှာအမျိုးသမီး-ပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (ဥပမာရင်သား) သူ Natal ယောက်ျားအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားအကျိုးစီးပွားကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏ဤပေါင်းစပ်ဝင်စားသောသူတစ်ဦးချင်းစီဟုခေါ်ကြသည် gynandromorphs (gyne အမျိုးသမီးကိုရည်ညွှန်းသည်, Andros အထီးငှါ၎င်း, morph ဤတစ် ဦး ချင်းစီကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောယောက်ျားများသည် gynandromorphophilic (Blanchard & Collins၊ 1993; ယခု မှစ. , ငါတို့) GAMs နှင့် GAMP အဖြစ် gynandromorphophilic အဖြစ် gynandromorphs ရည်ညွှန်း။ တစ်လိင်တံဆက်ပြီးစဉ်ခွဲစိတ်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဟော်မုန်းကုထုံးမှတဆင့်ထိုကဲ့သို့ရင်သားအဖြစ်အမျိုးသမီး-ပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများလေးလည်းအားဖြင့် GAMs ဖြစ်လာကြသူ Natal အထီးတစ်ခါတစ်ရံရိုးရှင်းစွာအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးများ၏ (ဥပမာ Operario et al ။2008) သို့မဟုတ် transwomen (ဥပမာ Weinberg & Williams၊ 2010) ဒါပေမယ့်အများအားနှင့်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် shemales1† or t-မိန်းကလေးငယ်များ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပါ ၀ င်သည့်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်ခုအရ 'shemales' သည်တဆယ်ခြောက်မြောက်လူကြိုက်အများဆုံးရှာဖွေရေးဝေါဟာရဖြစ်သည် (Ogas & Gaddam, 2011) ။ တစ်ဦးလူကြိုက်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဗီဒီယိုဆိုဒ်ကိုမှာဗီဒီယိုများတစ်ဦးကရေတွက် (http://www.aebn.net>> စုစုပေါင်း> 4071 ၏ 94 indexing '' shemale '' လြှော့။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးအပိုင်သူကို GAMs အတွက်လိင်စိတ်ဝင်စားမှု, အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးပုံစံတစ်ခုခုကိုမှလိင်စိတ်နိုးထကိုအလေးပေးထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ဘုံနားလည်မှုဖြင့်ဝိရောဓိဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ Freund, 1974) ။ ဤအချက်သည် GAMP အမျိုးသားများသည်ရိုးရိုးဘာသာဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုဖော်ပြသည်။ အမှန်မှာ GAMs များ၌လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောယောက်ျားလေးငယ်တစ်ဝက်၏တစ်ဝက်သည် bisexual (Weinberg & Williams၊ 2010) ။ ယောက်ျား GAMs ဖို့ဆွဲဆောင်ခြင်းရှိမရှိသို့သော်ရိုးရိုးယောက်ျားလေ့လိင်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးမှထက် GAMs ဖို့ဆွဲဆောင်ခံရဖို့နားလည်သဘောပေါက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်မရှင်းလင်းဖြစ်နေဆဲသမရိုးကျသဘောရိုးရိုးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
Ogas & Gaddam (2011) ကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြနိုင် GAMP များထဲမှအကောင့်ပေး။ အင်တာနက်ရှာဖွေရေးသမိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ GAM ညစ်ညမ်းရှာနေအများဆုံးယောက်ျားလိင်ကွဲဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦး '' ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား '' ကနေတစ်ဆင့် GAM ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်နှိုးဆွဖြစ်လာကြောင်းအဆိုပြုထား။ အများစုကလိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦးလူနှင့်နှိုးဆွခံရဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်နှစ်ဦးစလုံး featuring ညစ်ညမ်းရှာပါ။ ဒီအယူအဆအရ, GAMs GAMs ဤမြင်ကွင်းနှစ်ခုစလုံးအဖွဲ့ဝင်ရှုထောင့်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထထည့်သွင်းအထီးလိင်ကွဲ၏ပုံမှန်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အယူအဆ, သို့သော်, ယောက်ျားညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနေရာများအတွက် GAMP များအတွက်အကောင့်ရန်ပျက်ကွက်လိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသောနေရာများအတွက်အများဆုံးလိင်ကွဲယောက်ျားနေဆဲပြီးနောက် 'ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား' 'ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်အရာ, လူနှင့်နှိုးဆွခံရဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြားလိင်ကိုရှာပါ။
GAMP နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးကတတိယအယူအဆတစ်ခုကိုမကြာခဏတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် autogynephilia၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးသည်ရှားပါးသော်လည်းအထီးလိင်ကွဲဆက်ဆံခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည်။ Autogynephilia သည်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်မိမိ၏အတွေး (သို့) ပုံရိပ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွပေးသည် (Blanchard, 1989a , 1991; လောရင့်, 2004, 2013) ။ autogynephilia နှင့်အတူလူသူ (Blanchard ဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုထိုမိနျးမအဘို့လိင်ကွဲအလိုဆန္ဒရှိပါတယ်, 1992) ။ သွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားများအရ GAMP အမျိုးသားများသည် autogynephilic ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရယောက်ျား ၃၁.၁% သည်လိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လိင်ကွဲပြားမှုရှိသူများ၊ သို့မဟုတ် GAMs များနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြော်ငြာခြင်းကိုမိမိကိုယ်မိမိ cross-dressing (Blanchard & Collins, 1993); Cross-တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဖြစ်ကောင်း autogynephilia ၏အသုံးအများဆုံးပေါ်ထွန်းခြင်း (Lawrence ဖြစ်ပါတယ် 2013) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ Blanchard & Collins (1993) GAMs အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူယောက်ျားတို့အတွက်သီးခြားစီ Cross-ဆေးထည့်၏နှုန်းထားများမပေးခဲ့ပါဘူး se နှုန်း, (Cross-ပြုစုသို့မဟုတ်တယောက်အတွက်ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းအတိုး) ဆန်းစစ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်သည်။ မဟုတ်သလိုသူတို့ Non-GAMP ယောက်ျားအတွက် Cross-ဆေးထည့်တဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုနှုန်းသည်ခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုသေး GAMP ယောက်ျား autogynephilic ခံစားချက်တွေကိုထောက်ခံပေးသောဖို့ဒီဂရီအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက် GAMP ယောက်ျား, လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားစုဆောင်း: ပထမဦးစွာကျနော်တို့ယောက်ျား, မိန်းမ, ဒါမှမဟုတ် GAMs featuring ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများကိုတိုင်းတာ။ ဒုတိယအချက်အကြှနျုပျတို့သညျသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား (autogynephilia ၏ဥပမာဒီဂရီ) ၏ရှုထောင့်အပေါ်အုပ်စုများစစ်တမ်းကောက်ယူ။
လိင်ပြောင်းလဲသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသောအမျိုးသားများအတွက်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုရှာဖွေသည့်ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့် GAMP အမျိုးသားများသည်ချီကာဂိုဒေသဆိုင်ရာအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြု၍ ခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရသည်။ 'shemales' သို့မဟုတ် t- မိန်းကလေးများ။ ကြော်ငြာများတွင် 'shemales' ၌လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့် GAM များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုစစ်ဆေးသောအွန်လိုင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသောမေးခွန်းလွှာနှင့်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ GAMs များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိသောလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသူများအတွက်အလားတူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင် (စုစုပေါင်းချီကာဂို၏ Craigslist ၏ 'ကျပန်းတွေ့ကြုံမှုများ' အပိုင်းရှိ 'w4m' နှင့် 'm4m' စာရင်းများ) ကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ GAMs တွင်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်မ ၀ င်မှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးသောအွန်လိုင်းအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုမေးခွန်းလွှာကိုလည်းသူတို့ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။
နမူနာတွင် GAMP အမျိုးသား ၂၄ ဦး (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၃၄.၄၆၊ sd = ၁၁.၅၂)၊ ၂၁ လိင်ကွဲအမျိုးသားများ (အသက် ၃၅.၀၀၊ sd = ၁၄.၂၈) နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူ ၂၁ ဦး (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၃၂.၀၀၊ sd = ၆.၅၂) တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏အသက်အရွယ်သည်အုပ်စုများနှင့်မတူပါ။ p > 0.250 ။ နမူနာအရွယ်အစားကိုကြိုတင်သတ်မှတ်မထားဘူး၊ မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့သည်သုတေသနအတွက်ရရှိနိုင်သောရန်ပုံငွေများနှင့် GAMP အမျိုးသားများစုဆောင်းရာတွင်အခက်အခဲများကြောင့်ဖြစ်သည်။
လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုကြားနေဇာတ်ကားခုနစ်ခေါ်ဆောင်သွားဇာတ်ကားအပါအဝင်ကိုးဦး 3-မိရုပ်ရှင်, ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကြားနေရုပ်ရှင်ဂီတ soothing ဖြင့်လိုက်ပါသွားသဘာဝရှုခင်း featured ။ ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုပါးစပ်နှင့်ထိုးဖောက်မှုလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအတွက်စေ့စပ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အားလုံးအတွက် featured ။ , လူနှင့်အတူတစ်ဦး GAM featuring တဦးတည်း: နှင့် GAMs (GAM လှုံ့ဆော်မှု) ဖြင့်သုံးအစိတ်အပိုင်းများ; သူတို့နှစ်ခုသာအထီးသရုပ်ဆောင်များကို (အထီးလှုံ့ဆော်မှု), နှစျခုအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များကိုသာ (အထိုးဖောက်မှုလိင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှု) ဖြင့်နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများ featuring နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ် GAM featuring တဦးတည်း, နှစ်ယောက် GAMs နှင့်တသားတ။ သူတို့ arousal ၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်နေသောကြောင့်ယောက်ျားသို့မဟုတ်ရှိသောမိန်းမတို့သည်သာအပါအဝင်ခေါ်ဆောင်သွားဗွီဒီယိုများ (ထိုကဲ့သို့သောနေဆဲပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) အခြားရွေးချယ်စရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, လိင်တူဆက်ဆံသူသို့မဟုတ်လိင်ကွဲယောက်ျား၏ပုံမှန် arousal ပုံစံများထုတ်လုပ်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့ content တွေကိုများ၏အရင်းအမြစ်အကြောင်းကိုတည်ပြီးသတ်တယ်သတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့် နှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသရုပ်ဆောင်များကို (Chivers featuring လှုံ့ဆော်မှုဆန့်ကျင်အဖြစ် arousal, et al ။2004, 2007) ။ ဒီ GAMP ယောက်ျား၏လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ၏ပထမဆုံးလေ့လာမှုခဲ့သောကြောင့်, ကျနော်တို့ GAMs featuring လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပါဝင်သည်။
လိင်အင်္ဂါ arousal လိင်တံ၏လုံးပတ်ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာသည့်အင်ဒီယမ်-ဂယ်လီယမ် strain gauge သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal0မှ 10 (မျှလိင်စိတ်နိုးထ) မှတစ်စကေး (အလွန်အမင်းလိင်နှိုးဆွ) အပေါ်နေ့စဉ်လှုံ့ဆော်မှုကလစ်ရဲ့အဆုံးမှာအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ကွန်ပျူတာစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖြေဆိုသူမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ (ဥပမာ '' ဖြောင့် / လိင်ကွဲ ',' ရိုးရိုး '' လိင်တူ / လိင်တူဆက်ဆံသူ ') နှင့် Kinsey စကေးအပေါ်သူတို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Kinsey နှစ်ဦးစလုံးပေးအပ် et al ။1948သာအခြားလိင်အတွက်7(အတိုး) မှ0သာအတူတူလိင်အတွက် (အတိုး) အထိ), တစ်ဦး 6-အမှတ် Self-အစီရင်ခံစာစကေး။ သူတို့ကအစတစ်သက်တာ GAM ၏နံပါတ်များ, အမျိုးသမီးနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ Blanchard ဖြစ်ပြီး, autogynephilia ၏ဘွဲ့ဟာ Core Autogynephilia စကေး (CAS သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် 1989b ), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခံရဖို့ယောက်ျားရဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်တဲ့ 8-item အတိုင်းအတာမိမိကိုယ်ကိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်စိတ်ကူးခြင်းဖြင့်။ ဥပမာပစ္စည်းများမှာ - 'သင်သည်ကိုယ်၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည့်ကိုယ်ခန္ဓာရှိခြင်းသို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းရှိအမျိုးသမီးပုံစံအချို့ရှိခြင်းကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းလော။ 'မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထဖူးလား' လား။ CAS သည်အချက်အလက်များကိုမျက်နှာပြင်ခိုင်လုံသောပစ္စည်းများ (၁၆) ခုမှရရှိသည်၊ ၎င်းသည် alpha 16 ဖြင့်မြင့်မားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းမှမည်သည့်အချက်အလက်များကမှ GAMs များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမက်ဖွယ်ရာကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
လိင်အင်္ဂါနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္arန္ဒြေရှိသော arousal အချက်အလက်များကိုရောနှောထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဆုတ်ယုတ်မှုကို အသုံးပြု၍ သင်တန်းသားများကို Level-2 ယူနစ်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းကလစ်များသို့ level-1 response variable (Raudenbush & Bryk၊ 2002) ။ Regression မော်ဒယ်များ (အတွင်း-ဘာသာရပ်များ) နှစ်ခုစီစဉ်ထားလှုံ့ဆော်မှုပါဝင်သည်ခြားနား: အခြားခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ GAM လှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်တစ်ခုနှင့်အတူအထီးလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းတပါးတည်း။ ဤရွေ့ကားအတွင်း-ဘာသာရပ်များထူးခွားသညျ့ကျပန်းဘာသာရပ်များအကြားကွဲပြားခြားနားခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ မော်ဒယ်လည်း (အကြား-ဘာသာရပ်များ) နှစ်ခုအုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည်ခြားနား: အခြားအုပ်စုနှစ်စုနှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်အတူ GAMP ယောက်ျားနှိုင်းယှဉ်တစ်ခုနှင့်အတူလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းတပါးတည်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မော်ဒယ်များလည်းခေါ်ဆောင်သွားဦးစားပေး၏ပုံစံများအတွက်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှု illuminated ရာလေး Cross-level ကိုအပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများ, ပါဝင်သည်။ ဤအအပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုသီအိုရီအကျိုးစီးပွားနှင့်ရလဒ်များအပိုင်း။ သို့သော်နောက်ဆက်တွဲဇယား S1 နှင့် S2 သည်ဤဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များနှင့်ဆနျ့ကငျြဘ codes တွေကိုအတှကျအသုံးပွုအတိအကျအရေအတွက်တန်ဖိုးများအပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတျကိုပေး။
ဆုတ်ယုတ်ကိန်းစံချိန်စံညွှန်းမီအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား၏အစီအမံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဒါဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပို့ချခြင်းမပြုမီ, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal များအတွက်တန်ဖိုးများကိုစံ။ ပိုများသောအထူးသ, လိင်အင်္ဂါ arousal ဒေတာအတွက်ကျနော်တို့က (a) (arousal အတွက်အခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပျမ်းမျှအား arousal ကနေခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏သုံးမျိုး၏တစ်ဦးချင်းစီဖို့ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပျှမ်းမျှ arousal () နုတ်ထားပါb) (အပေါင်းတို့, သင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးအခြေခံ-controlled arousal အပေါင်းတို့နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကလစ်ပ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံသွေဖည်တွက်ချက်c) (ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံသွေဖည်ခြင်းအားဖြင့်အခြေခံ-controlled arousal ဒေတာကိုခှဲဝေနှင့်d) ကိုယခုစံအချက်အလက်များ၏ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များမှသည်မြှောက်ဖော်ကိန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ အတိအကျတူညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဟာပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ဒေတာအတွက်အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။
ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လုံလောက်စွာတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်သူကိုသင်တန်းသားများအနေဖြင့်လိင်အင်္ဂါ arousal data တွေကိုဖယ်ထုတ်မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ (ဤနေရာတွင် Non-နဖယ်ထုတ်ပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်မေးခွန်းလွှာမဖြေကြဘူးတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမှအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ) အတိတ်သုတေသန (ဥပမာ Chivers အတွက်အမျှ et al ။2004ပါ ၀ င်မှုအတွက်တုန့်ပြန်ချက် ၂ ခုနှင့်ကိုက်ညီရန်သင်တန်းသားများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး ipsatized (ဆိုလိုသည်မှာအတွင်း - ဘာသာရပ်များစံသတ်မှတ်ထားသော) လိင်အင်္ဂါနှိုးဆွမှုအနည်းဆုံးတစ်မျိုး (ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ GAM) ကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်ပုံမှန်သွေဖည်မှုထက်ဝက်ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအားဖြင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများထက်ကျော်လွန်ရမည်။ (ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှ arousal မှလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီသို့လှုံ့ဆော်မှုများအားလုံးအားပျမ်းမျှလိင်အင်္ဂါနှိုးခြင်းကိုနုတ်ခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုကို ဖြတ်၍ နှိုးဆော်ခြင်းကိုစံသွေဖည်ခြင်းအားဖြင့်ခွဲခြားခြင်းအားဖြင့် ipsatized ဖြစ်သည်။ ) ဒုတိယ၊ အခြေခံအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည့်လိင်အင်္ဂါနှိုးဆော်ခြင်း (ပျှမ်းမျှလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်တိုင်းတာသည်) erotic လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားနှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများအကြား) erotic လှုံ့ဆော်မှုအနည်းဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုအတွက် ၂ မီလီမီတာထက်ပိုရမည်။ ဤစံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ GAMP၊ လိင်ကွဲနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများအတွက်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် ၉၅.၈% (၂၃/၂၄)၊ ၇၁.၄% (၁၅/၂၁) နှင့် ၈၁.၀% (၁၇/၂၁) အသီးသီးဖြစ်ကြသည်။ တုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည်အုပ်စုများအလိုက်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ (Fisher ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတိအကျ = 2) ။ လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသူပါဝင်သူနေဆဲပုဂ္ဂလဒိive္နှိုးဆွသို့မဟုတ်မေးခွန်းလွှာဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီအလုပ်ကိုမှပံ့ပိုးအားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ပေါ်နှင့် 1975 အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအဖြစ် 2008 ၏ဟယ်လ်စင်ကီကြေညာစာတမ်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကော်မတီများ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းအခိုင်အမာ။ အထူးသကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခု Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့လေ့လာမှုပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သဖန်းသီး။ 1, GAMP ယောက်ျား (ခြုံငုံလိင်အင်္ဂါ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ဦးစလုံးလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားထက်လိင်ကွဲဖို့ပိုအလားတူခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 1a ) နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ (သဖန်းသီး။ 1b ) arousal ပုံစံများ။ သို့သော်လိင်ကွဲလူတို့အားနှိုင်းယှဉ် GAMP ယောက်ျားပို GAM လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွပေးခဲ့သည်။ GAMP နှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးမှမတူဘဲ, လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားလိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal တစ်ဦးကွဲပြားပုံစံရှိခဲ့ပါတယ်။
(က) အခြေခံ-controlled လိင်အင်္ဂါ arousal နှင့် (ခ) ကုန်ကြမ်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ပုံစံများ (ဆိုလိုသည်မှာ0ကနေယူနစ်အတွက် - 10 မရှိလိင်စိတ်နိုးထ - အလွန်အမင်းလိင်နှိုးဆွ) ပါဝင်သူအုပ်စုကွဲကွာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ Shaded ဒေသများစံအမှားများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ GAM, Gynandromorph; GAMP, gynandromorphophilic ။
ရောနှောထားသောဆိုးကျိုးများဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များ [GAMP နှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားသိသိသာသာပိုပြီးလိင်အင်္ဂါသည်အခြားခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးသားယောက်ျားကိုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်β = 1.81, 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI) 1.39-2.22, p <0.001] နှင့်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ် GAM ကိုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် (β = 0.54, 95% CI 0.10-0.99, p = 0.018) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် GAMP နှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားများသည်အခြားလိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသားများ၏လှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်အင်္ဂါမှတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးသည်။β = -0.05, 95% CI -0.52 မှ 0.42, p > 0.250) ။ သို့သော် GAMP အမျိုးသားများသည်လိင်ကွဲယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် GAM လှုံ့ဆော်မှုကိုသိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသောလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့သည် (β = 0.61, 95% CI 0.11-1.12, p = 0.017) ။ ထိရောက်သောနှိုးဆွမှုကိုလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်များ၏အမှတ်ခန့်မှန်းချက်သည်လိင်အင်္ဂါနှိုးဆွမှုထက်ပိုမိုကြီးမားသော်လည်းအသေးစိတ်ရလဒ်များအတွက်နောက်ဆက်တွဲဇယား S2 တွင်ကြည့်ပါ။
သဖန်းသီး။ 2a ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို Kinsey စကေးဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ ပြသထားသည့်အတိုင်းလိင်ကွဲယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာအထူးစိတ်ဝင်စားမှုကိုတင်ပြကြပြီး၊ သို့သော် GAMP အမျိုးသား Kinsey ရမှတ်များမှာအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်ပြီး GAMP အမျိုးသားများအကြားတစ်မူထူးခြားမှုပိုများသည်။ GAMP အမျိုးသားများသည်ကင်ညာစကေးရှိလိင်ကွဲနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့်ကွဲပြားသော်လည်း ps <0.001), GAMP အမျိုးသားများသည်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများထက်လိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်ပိုမိုဆင်တူသည် (p <0.001) ။ စားပွဲတင် 1 ပါဝင်သူအုပ်စုကွဲကွာသည့် Kinsey စကေးများအတွက်နည်းလမ်းနှင့်စံသွေဖီပြသထားတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 2.Strip ကြံစည်မှုနှင့် (က) Kinsey စကေးနှင့်ပါဝင်သူအုပ်စုကွဲကွာ (ခ) Core Autogynephilia စကေးများအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ GAMP, Gynandromorphophilic ။
အနိမျ့ resolution ကိုဗားရှင်း high resolution ဗားရှင်း
စားပွဲတင် 1။ အဆိုပါ Kinsey စကေးတစ်သက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏နံပါတ်များ, နှင့် Core Autogynephilia စကေးများအတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယား
သဖန်းသီး။3ပါဝင်သူတစ် ဦး စီ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး GAM၊ အမျိုးသမီးနှင့်အထီးလိင်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များကိုစီစဉ်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း GAMP အမျိုးသားများသည်အခြားယောက်ျားများထက် GAM လိင်ဆက်ဆံဖက်များတစ်သက်တာတွင်သိသိသာသာပိုမိုများပြားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (d = 0.73, 95% CI 0.18-1.28, p = 0.036)2။ GAMP ယောက်ျား၏အကြမ်းဖျင်းတစ်ဝက် (46%) လိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျား၏ 0% ၏ 11% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းဆုံးတဦးတည်း GAM မိတ်ဖက်ရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, GAMP ယောက်ျားနောက်တဖန်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားထက်လိင်ကွဲဖို့ပိုအလားတူခဲ့ကြသည်: GAMP နှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များ၏ဆင်တူနံပါတ်များကိုအစီရင်ခံ (d = 0.32, 95% CI -0.31 မှ 0.95, p > ၀.၂၅၀)၊ လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသိသိသာသာပိုများကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် (d = 1.07, 95% CI 0.47-1.67, p <0.001) ။ သို့သော် GAMP အမျိုးသားများကလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများထက်အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသိသိသာသာပိုများကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် (d = 0.77, 95% CI 0.12-1.42, p = 0.010), လိင်တူဆက်ဆံယောက်ျား GAMP နှင့်လိင်ကွဲယောက်ျားထက်ပိုမိုသိသိသာသာပိုမိုအစီရင်ခံတင်ပြ (d = 3.29, 95% CI 2.45-4.12, p <0.001) ။ GAMP အမျိုးသားများ၏ထက်ဝက် (၄၆%) ကအနည်းဆုံးအထီးဖက်တစ် ဦး ရှိကြသည်ဟုဆိုကြပြီး၊ ၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့် ၁၀၀% မှာလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ GAMP အမျိုးသားများသည်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း GAM သည်မြင့်မားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ စားပွဲတင် 1 ပါဝင်သူအုပ်စုကွဲကွာသည့်နည်းလမ်းများနှင့်တစ်သက်တာ GAM ၏နံပါတ်များကိုများအတွက်စံသွေဖီ, အမျိုးသမီးနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပြသထားတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။3။ strip ကြံစည်မှုနှင့်ပါဝင်သူအုပ်စုကွဲကွာတသက်တာ gynandromorph, အမျိုးသမီးနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏နံပါတ်များကိုများအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ GAMP, Gynandromorphophilic ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, GAMP ယောက်ျား၏ 41.7% (10 / 24) ရိုးရိုးအဖြစ်ဖော်ထုတ်နှင့်အရာကြွင်းလေလိင်ကွဲအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, လိင်ကွဲ-ဖော်ထုတ် GAMP လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ရိုးရိုး-ဖော်ထုတ် GAMP ယောက်ျား (ထို Kinsey စကေးအပေါ်လူတို့အားသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအစီရင်ခံတင်ပြd = 1.59, 95% CI 0.55-2.63, p <0.001), နှင့်တစ်သက်တာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (d = 0.72, 95% CI -0.20 မှ 1.65, p = 0.113) ။ သိသာထင်ရှားမှုမရှိသော်လည်းအမျိုးသားလိင်ကြင်ဖော်ဘက်များအကြားကွာခြားချက်မှာအလယ်အလတ်ရှိသေးသည်။ ဤအမျိုးသားများ၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆန်းစစ်မှုနှင့်အပြုအမူသည်လိင်ကွဲလိင်ကွဲဖော်ထုတ် GAMP အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယောက်ျား၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုအခြေခံ - ထိန်းချုပ်ထားသည့်လိင်အင်္ဂါနှိုးဆော်ခြင်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။d = -0.27, 95% CI -1.18 မှ 0.63, p > 0.250) ။
သဖန်းသီး။ 2b ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ CAS ကို Blanchard၊ 1989b) ။ ပြသထားသည့်အတိုင်း GAMP အမျိုးသားများကသာ autogynephilia ကိုမကြာခဏအစီရင်ခံလေ့ရှိသည်။ GAMP အမျိုးသား ၄၂% သည်ရမှတ်> ၁ ရှိပြီး၊ လိင်ကွဲအမျိုးသား ၁၂% နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူ 42% ရှိသည်။ တကယ်တော့ GAMP အမျိုးသားတွေဟာလိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားတွေထက် autogynephilia ကိုပိုပြီးသိသိသာသာပိုများစေတယ် (d = 1.20, 95% CI 0.62-1.77, p <0.001), လိင်ကွဲနှင့်လိင်တူဆက်ဆံယောက်ျားကွဲပြားသော်လည်းမ (d = 0.40, 95% CI -0.28 မှ 1.08, p = 0.210) ။ GAMP အမျိုးသားများအနက် CAS ၏ရမှတ်များသည်လိင်အင်္ဂါတစ်ခုခုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (r21 = ၆၈.၃၃၊ p > 0.250), သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal (r21 = ၆၈.၃၃၊ p > 0.250), GAMs ရန်။ သို့သော်ရိုးရိုးလိင်ဆက်ဆံသူများကိုဖော်ထုတ်သော GAMP အမျိုးသားများသည်လိင်ကွဲလိင်ကွဲဖော်ထုတ် GAMP အမျိုးသားများထက် (autogynephilia) သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် (d = 1.38, 95% CI 0.37-2.38, p = 0.007) ။ ထို့ကြောင့် GAMP အမျိုးသားများအကြား၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အမျိုးသားများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ autogynephilia နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စားပွဲတင် 1 ပါဝင်သူအုပ်စုကွဲကွာသည့် CAS များအတွက်နည်းလမ်းနှင့်စံသွေဖီပြသထားတယ်။
GAMP ယောက်ျားကပို autogynephilic နှင့်ပိုပြီးနှစ်ဦးစလုံးလိင် (GAM တို့ကနှိုးဆွခဲ့သည်v။ လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီး) လှုံ့ဆော်မှု။ ကျနော်တို့ GAMP ဖြစ်ခြင်းနှင့် autogynephilic ဖြစ်ခြင်းအကြားရှက်ကြောက်နှစ်ခုအုပ်စုများအကြားလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ၌ဤခြားနားချက်အဘို့အကောင့်နိုင်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာတှငျကြှနျုပျတို့ GAMP ယောက်ျားနေဆဲ autogynephilia ကစာရင်းအင်းထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်အချိန်မှာတောင်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ GAM လှုံ့ဆော်မှုဆွေမျိုးမှလိင်ကွဲယောက်ျား, (လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုကြီးတဲ့လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရβ = 0.67, 95% CI 0.11-1.23, p = 0.020) ။ ပုဂ္ဂလဒိive္ကိုနှိုးဆွမှုအတွက်ရလဒ်မှာ (β = 1.02, 95% CI 0.61-1.44, p <0.001) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ကွဲယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက GAMP အမျိုးသားများသည် GAMP ဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးများလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်မှုကိစ္စအားပိုမိုနှိုးဆွသောပုံပေါ်သည်။ ၎င်းတို့သည် autogynephilic ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအမည်ရ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွင် စုပေါင်း. ထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းကိုအရှင်းလင်းအဖြေပေး GAMP ယောက်ျားမဟုတ်သော: GAMP ယောက်ျားလိင်တူဆက်ဆံသူမရှိကြပေ။ ဤသည်လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများမှလေးစားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူထင်ရှားခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, GAMP ယောက်ျားသူတို့အားအရိုအသေအပေါငျးတို့သအတွက်လိင်ကွဲယောက်ျားပိုပြီးဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ GAMP ယောက်ျားကပို GAM တို့ကနှိုးဆွပေးခဲ့သည်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့် GAMP ယောက်ျား autogynephilia အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ: သို့သော်လည်းထိုအုပ်စုနှစ်စုအကြားနှစ်ဦးကိုအဓိကကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ GAMP နှင့်လိင်ကွဲလူတို့၏စပ်ကြားလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ၌ဤပထမဦးဆုံးခြားနားချက် autogynephilia အတွက်ဒုတိယခြားနားချက်များ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံကွဲပြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု၏လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့် GAMP အမျိုးသားများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုသည် GAMP အမျိုးသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးသဖြင့်လိင်ကွဲယောက်ျားများ၏နမူနာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စေသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားတွေမှာ GAMs ကိုလိင်စိတ်နည်းပါးတာနဲ့မတူတာလား။ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူခဲ့သောဆက်စပ်သောစစ်တမ်းတစ်ခုတွင် Amazon Mechanical Turk မှစုဆောင်းထားသည့်လိင်ကွဲယောက်ျားများ၏ ၅.၃% (၁၂/၂၂၇) သာ GAM (AM Rosenthal) ကိုဆွဲဆောင်သည်။ et al ။, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) ။ ထို့ကြောင့် GAMP ကိုထောက်ခံသူများဖယ်ထုတ်ထားသောကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင်လိင်ကွဲလိင်ကွဲနမူနာများသည်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ကွဲနမူနာကိုသာမန်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သည် Ogas & Gaddam မှထင်မြင်ချက်ကိုဆန့်ကျင်သည် (2011) လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် Got များက 'erotical illusion' ကိုနှိုးဆွကြသည်။ အမှန်စင်စစ်လိင်ကွဲယောက်ျားများ၏ GAM လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်နှိုးဆွမှုသည်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုများထက်အမျိုးသားများထက်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနည်းသည်။ သို့သော်လိင်နိမ့်ယောက်ျားများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနည်းသော်လည်း GAM လှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်လှုံ့ဆော်မှုများထက်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုနိမ့်သော်လည်းလိင်မှုကိစ္စကိုအချို့သောလိင်အင်္ဂါမှနှိုးဆွသည်။
အတိတ်နမူနာများ (ဥပမာ Weinberg & Williams၊ 2010), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GAMP ယောက်ျားအဖြစ်ရိုးရိုးသိရှိနိုင်ဖို့အတန်အသင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ သူတို့ရဲ့ရိုးရိုးအထောက်အထားတွေကို, သို့သော်, အထီးလှုံ့ဆော်မှုဖို့သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူမပတျသကျဘူး။ အဲဒီအစားရိုးရိုးဖော်ထုတ်ခြင်းအပြုသဘော autogynephilia ၏ဒီဂရီနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Blanchard ဖြစ်ပြီး (1989b ) autogynephilia နှင့်အတူရိုးရိုး-ဖော်ထုတ်လူအလိုရှိသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယောက်ျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံ၏စိတ်ကူး eroticize ဖို့အထူးသဖြင့်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သူသည်ဤအတိုးကိုခေါ် pseudobisexualityဒါကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအလောင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စစ်မှန်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုးအနေဖြင့်မတူလို့ပဲ။ autogynephilic ယောက်ျားတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာတော့ Self-အစီရင်ခံရိုးရိုးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တသက်တာ၏အမြင့်မားတဲ့အရေအတွက်ကအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦးသည်လူ (Hsu နှင့်အတူ (အထူးသဖြင့်လိင်) အပြန်အလှန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူးပိုမို Self-အစီရင်ခံ autogynephilic arousal ဟောကိန်းထုတ် et al ။2015) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင် pseudobisexuality ကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုသော်လည်း GAMP အမျိုးသားများကြားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ နောက်ထပ်ပံ့ပိုးဖွယ်ရှိပံ့ပိုးသည် GAMs တွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်လိင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်တူချင်းလိင်မှုနှိုးဆွမှုများကို GAM လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏လိင်မှုနှိုးဆွမှုများကိုအမျိုးသားလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သို့သော် GAMP အမျိုးသားများနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်ဆွဲဆောင်မှုနှင့် GAMs ကိုနှိုးဆွခြင်းသည်အထီးပုံစံကိုစိတ်ဝင်စားမှုအကန့်အသတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် GAMP အမျိုးသားများသည်သမားရိုးကျအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမြင်မတူကြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုနှစ်ခုအရေးကြီးသောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုမပေးပါဘူး။ ပထမဦးစွာအဘယ်ကြောင့်အချို့သောယောက်ျား GAMs မှပိုမိုလိင်စိတ်နိုးထဖွံ့ဖြိုးသလဲ? ဒုတိယအချက်အဘယျကွောငျ့ autogynephilia နှင့် GAMP အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ရှိသလော ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဤမေးခွန်းများကိုသီးခြားအဖြေကိုလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိယခင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့် ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာမအကြံပြုချက်များရှိပေမယ့်ကျနော်တို့အဆုံးစွန်သောရက်နေ့တွင်အောက်ပါထင်ကြေးပူဇော်: autogynephilic ယောက်ျားလိင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာခြင်းဟူသောအယူအဆအားဖြင့်နှိုးဆွနေကြသည်။ GAMs လူထဲကမိန်းမအားအကူးအပြောင်း instantiate ။ ရလဒ်အဖြစ် GAMs သူတို့ရဲ့ autogynephilic arousal ဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်များကိုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသူတို့ Non-autogynephilic GAMP ယောက်ျားထံမှကွာခြားခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့ GAM လှုံ့ဆော်မှုစားသုံးနေချိန်မှာသူတို့အကြံနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပေါ် autogynephilic GAMP ယောက်ျားအင်တာဗျူးထုတ်ဖော်ပြောဆို (သို့မဟုတ် GAM မိတ်ဖက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်) နိုငျသညျ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုရလဒ်များစိတျထဲတှငျအခြို့သောကန့်သတ်နှင့်အတူအနက်ရပါမည်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအရွယ်အစားအဓိကအားကြောင့်ရန်ပုံငွေထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ GAMP ယောက်ျားစုဆောင်းအတွက်အခက်အခဲဖို့, သေးငယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရလဒ်များကို, အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူများ, အနာဂတ်ပွားစောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးကစက္ကန့်အလားအလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ GAM လှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလှုံ့ဆော်မှုမှဿုံအလားတူကြဘူး။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလှုံ့ဆော်မှုပုံဖော်လိင်တူစုံတွဲများပေမယ် GAM လှုံ့ဆော်မှုတဦးတည်း GAM-အထီးစုံတွဲ, တဦးတည်း GAM-အမျိုးသမီးစုံတွဲနှင့်တဦးတည်း GAM-GAM စုံတွဲပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ GAM-GAM လှုံ့ဆော်မှုပင်သည်အခြား GAM လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အထူးသဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော ရှိ. , အရှင် arousal evoking မှာအလားအလာနည်းသည်ထိရောက်သောဖြစ်အံ့သောငှါစိုးရိမ်သောကြောင့်ငါတို့သည်ဤအရောအနှောကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အလားအလာအားနည်းချက်ရှိခဲ့ပါလျှင်, အဲဒါကိုပိုပြီးခက်ခဲ GAMP ယောက်ျားနှင့်အခြားသောလူတို့သညျအကြားကွဲပြားခြားနားမှု detect လုပ်ဖို့စေကြပြီ။ လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျား GAMs နှိုးဆွသောမတှေ့ဘူးပင်လျှင်လူတပါဝင်သောကြောင့်ဥပမာ, သူတို့အတန်ငယ်ပု GAM-အထီးလှုံ့ဆော်မှုကလစ်ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွနိုင်ပါသည်။ အမှန်မှာဒီလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားကပိုအမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထက် GAM လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွပေးခဲ့သည်, ဘာကွောငျ့လဲလိင်ကွဲယောက်ျား analog ပိုအထီးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထက် GAM လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်အခြားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့တိုင်, ငါတို့ GAMP ယောက်ျားနှင့်အခြားအုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအကြားကွဲပြားခြားနားမှု detect လုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီမှာဆွေးနွေးပါသောနောက်ဆုံးန့်အသတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုအနောက်တိုင်းလူဖြစ်ကြ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး-ပုံမှန်အမည်များ, ဆံပင်ပုံစံတွေ, စားဆင်ယင်, ထုံးစံနှင့်အကျိုးစီးပွား (VanderLaan: ဆာမိုအာနှင့်အချို့သောအခြားယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားပုံမှန်အားဖြင့်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၌ GAMs မှအတန်ငယ်အလားတူသောလိင်တင်ဆက်မှုမွေးစားခဲ့ကြ et al ။2013) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးကြီးသော်လည်းဤလူတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သော GAMs နဲ့တူရင်သားအဖြစ်အမျိုးသမီး-ပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသည်ဟုဝယ်ယူကြပြီမဟုတ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြသူ Samoan အဘိဓါန်လိင်ကွဲယောက်ျား (ခေါ်တွေ့ရှိခဲ့ မင်္ဂလာပါ ) မိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှု၌ထိုကဲ့သို့သောအတှေ့အကွုံ (Petterson မပါဘဲလိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါခေါ်ဆောင်သွားအကျိုးစီးပွားကသူတို့ပုံစံများပိုမိုရိုးရိုးခဲ့ကြသည် et al ။2015) ။ သူတို့အားရလဒ်များကိုငါတို့နှင့်အတူနှိုငျးယှဉျဖို့ပေါ်လာပေမယ့်, ခေါ်ဆောင်သွားအကျိုးစီးပွားလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားနှင့်တိုင်းတာခြင်းပါဝငျသောလေ့လာမှုများအကြားအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ ထို့အပွငျ မင်္ဂလာပါ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ GAMs ဖို့အတော်လေးပု Samoan အဘိဓါန် Analog စမရှိကြပေ။ တဦးတည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေအများဆုံးလိင်ကွဲယောက်ျားပင်ထိုကဲ့သို့သောယဉ်ကျေးမှုအတွက်, ယောက်ျားတစ်လူနည်းစုအတော်လေးပိုပြီးဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည် (နှင့်အားဖြင့်နှိုးဆွခြင်းရှိမရှိ, ထိုကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှု stigmatized မဟုတ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှု၌ GAMs မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနိုင်စွမ်းနှင့်ဒုတိယများမှာဖြစ်စေ, ပထမဦးဆုံးသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စေခြင်းငှါ, Natal မိန်းမတို့အားထက်) GAMs ။
GAMP နှင့်အတူအချို့သောယောက်ျား Self-နားလည်မှုသူတို့ရဲ့မရှိခြင်း (ဥပမာဗေ့ခ်ျနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကြ 2010; Clark က-Flory, 2011; Bering, 2012), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များဖြစ်ရပ်ဆန်းအချို့ကိုနားလည်မှုပေး။ ဥပမာအား, လူ GAMs အားမိမိဆွဲဆောင်မှုသူ, ဗေ့ခ်ျ (လိင်တူချစ်သူခဲ့တာကိုဆိုလိုခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းလိင်အကြံဉာဏ်ကိုပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် '' ဗေ့ခ်ျမတ်ေတာသညျ '' မှရေးသားခဲ့သည် 2010) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သူမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု; အကယ်စင်စစ် GAMP ယောက်ျားကပိုလိင်လိင်ကွဲလူဖြစ်ကြ၏ထက်လူတို့နှိုးဆော်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ သေချာဖြစ်စေရန်, GAMP ယောက်ျားလိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်တူဆက်ဆံသူအတှေ့အကွုံတိုးလာကြပါပြီခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီထိုကဲ့သို့သော autogynephilic pseudobisexuality အဖြစ်လိင်တူဆက်ဆံသူသို့မဟုတ်ရိုးရိုး orientation ကိုထက်အခြားအချက်များ, ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့အလားအလာလိင်-related ကိစ္စများ၏သိပ္ပံကိုရည်မှတ်သည်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်အကြီးတန်းစာရေးဆရာဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူကိုတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ် Vignette နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအားဖြင့် illuminated နှစ်ခုသည်အခြားလက်တွေ့ဖြေရှင်းပေးရန်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖြစ်သူသည် GAM များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအစောပိုင်းကတည်းကသူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့ဟာရံဖန်ရံခါ GAM ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံတွေကိုသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝမှာအတူတကွထည့်သွင်းခဲ့ကြပြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွလက်တွဲပြီးနောက်တွင်၎င်းအလေ့အကျင့်သည်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်၎င်းတို့၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခံစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာအမျိုးသမီးကိုလက်မခံနိုင်သောကြောင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရ GAM လှုံ့ဆော်မှုများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ GAMP အမျိုးသားများအတွက်၎င်းတို့၏လိင်အင်္ဂါနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္အားနှိုးဆွမှုအကြားအမျိုးသမီးနှင့် GAM လှုံ့ဆော်မှုများကွာခြားချက်သည်သုညနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ (၎င်းသည်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏ GAM လှုံ့ဆော်မှုကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းခြင်းကြောင့် GAMP အမျိုးသားများနှင့်ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ) သို့သော် GAMP အမျိုးသားအနည်းငယ်သည်သက်သေအထောက်အထားများကိုပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း GAM နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သီးသန့် ဦး စားပေးမှုများမရှိခဲ့ပါ။ ဤအမျိုးသားများသည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်မကျေနပ်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။
GAMs နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏သမိုင်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူရှည်လျားသောလူမှုရေးအရအမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍမှှုနှင့်လိင် reassignment ခွဲစိတ်ရယူထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ GAMs နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကဲ့သို့မိမိကိုမိမိစိတ်ကူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကျား dysphoria ပုံမှန်လူတို့တွင်ထက် GAMP လူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ autogynephilia အစီရင်ခံရန်သည်အခြားယောက်ျားထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်, autogynephilia ကျား dysphoria (Blanchard ဖြစ်ပြီးနှင့်ဆက်စပ်သည် 1993; Hsu et al ။2015) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို (autogynephilia ထက်ဝက်သာအဖြစ်, GAMP လူတို့တွင်ဝေးတစ်လောကလုံးကနေကြောင်းအကြံပြုn = 12) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GAMP နမူနာ autogynephilia သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သုံးပုံတစ်ပုံ (n = ၈) CAS တွင်ရမှတ်အနည်းဆုံး (၆) ခုရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပျမ်းမျှ autogynephilic ကျားမခွဲစိတ်မှုလူနာနမူနာထက်ကျော်လွန်သည် (Blanchard, 1989b ).
GAMP တစ်ညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်, ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်သော်လည်းခေါ်ဆောင်သွားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မှုမရှိခြင်းနှစ်ဦးစလုံးသိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူမှုရေးအရ, ကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ GAMP ယောက်ျားနှင့်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်မကြာခဏ GAMP ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းချက်ရှာ (GAMs အတွက်အကျိုးစီးပွားလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ခြင်း၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်ရှိမရှိ) နှင့်အဝိဇ္ဇာကနေခံစားခဲ့ကြရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနနားလည်မှုဆီသို့သိသိသာသာခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကျနော်တို့လေ့လာမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သင်တန်းသားများကို running အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီအတွက် Arundati Nagendra ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အစောပိုင်းဗားရှင်းသုံးသပ်ဘို့နှင့်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်ပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်ပေးဘို့အန်းအေလောရင့်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ။ ဤသည်သုတေသနပြုအဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ကိုမဆိုရန်ပုံငွေအေဂျင်စီထံမှထောက်ပံ့ငွေ, စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်မ-များအတွက်အကျိုးအမြတ်ကဏ္ဍများကိုလက်ခံရရှိ
Arun, W က (2006) ။ မီဒီယာအတွက်လိင်ပုံရိပ်တွေ။ သတင်းနှင့်လိင်ခုနှစ်တွင်: ။ မတူကွဲပြားခြင်း၏မီဒီယာ Portraits (။ ed Castañeda, L. နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်, SB), စစ 111-133 ။ sage: တစ်ထောင်သပိတ် CA. [Google Scholar]
Bering, JM (2012) ။ ထိုနေ့၏ SL စာ: လိင်တံနှင့်အတူဖြောင့်ခင်ပွန်းရဲ့ညှို့ (http://slog.thestranger.com/slog/archives/2012/08/07/sl-letter-of-the-day-a-straight-husbands-fascination-with-penises) ။ 29 သြဂုတ်လ 2014 ဝင်ရောက်။
Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို (1989 a) ။ nonhomosexual ကျား dysphorias ၏ခွဲခြားနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 18, 315-334 ၏မော်ကွန်း။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို (1989 b) ။ autogynephilia နှင့်အထီးကျား dysphoria ၏ typology ၏အယူအဆ။ အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ 177, 616-623 ၏ဂျာနယ်။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Blanchard, R ကို (1991) ။ လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် autogynephilia ၏စနစ်တကျလေ့လာမှုများ။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး 17, 235-251 ၏ဂျာနယ်။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို (1992) ။ autogynephilia နှင့်လိင်ကွဲဆွဲဆောင်မှု၏ Nonmonotonic စပ်လျဉ်း။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ 101, 271-276 ၏ဂျာနယ်။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို (1993) ။ autogynephilia နှင့်ကျား, မ dysphoria ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအမျိုးပေါင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 22, 241-251 ၏မော်ကွန်း။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို, Collins, PI (1993) ။ transvestites, တယောက်, သူ-ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူယောက်ျား။ အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ 181, 570-575 ၏ဂျာနယ်။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Chivers, ML, Rieger, G Latty, အီး, ဘေလီ, JM (2004) ။ လိင်စိတ်နိုးထများ၏တိကျသောအတွက်တစ်ဦးကလိင်ခြားနားချက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ 15, 736-744 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Chivers, ML, Seto, MC, Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို (2007) ။ ကျားနှင့်လိင်ရုပ်ရှင်များအတွက်သရုပ်ဆောင်များကို၏ကျားမနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ 93, 1108-1121 ၏ဂျာနယ်။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Clark က -Flory, T က (2011) ။ လိင်မှုကိစ္စဆွဲဆောင်မှုနောက်ကွယ်ကဘာလဲ (http://www.salon.com/2011/10/21/whats_behind_transsexual_attraction) ။ 29 သြဂုတ်လ 2014 ဝင်ရောက်။
Freund, K သည် (1974) ။ အထီးလိင်တူဆက်ဆံခြင်း: အပုံစံတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်း၏ဇီဝနှင့်စိတ်ဓာတ်အခြေစိုက် (ed Loraine ဂျေ။ ), စစ 25-81 ။ လိင်တူချစ်ခြင်းနားလည်ခြင်း၌တည်၏။ Elsevier: နယူးယောက်, NY ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Hsu, KJ, Rosenthal, Am, ဘေလီ, JM (2015) ။ autogynephilia အကဲဖြတ်ပစ္စည်းများကို၏ psychometric ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 44, 1301-1312 ၏မော်ကွန်း။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kinsey, AC, Pomeroy, WB, မာတင်, အီး (1948) ။ လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Saunders: Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး။ [Google Scholar]
လောရင့်, AA ကို (2004) ။ Autogynephilia: ကျား၊ မလက္ခဏာဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာ paraphilic မော်ဒယ်။ လိင်တူချစ်သူ & လိင်တူချစ်သူ Psychotherapy 8 ဂျာနယ်, 69-87 ။ [Google Scholar]
လောရင့်, AA ကို (2013) ။ အမျိုးသားများ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိတ်မိနေသောအမျိုးသားများ။ Autogynephilic Transsexualism ၏ဇာတ်ကြောင်းများ။ Springer: နယူးယောက်, NY ။ [Google Scholar]
Ogas အိုအို Gaddam, S (2011) ။ ဘီလီယံပေါင်းများစွာသောအတွေးအခေါ် - ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကလူသားတို့၏ဆန္ဒကိုဖော်ပြသည်။ Dutton အရွယ်ရောက်ပြီးသူ - နယူးယောက်၊ [Google Scholar]
Operario, D, Burton, ဂျေ, Underhill, K ကို Sevelius, ဂျေ (2008) ။ လိင်မိန်းမနှင့်လိင်ရှိသည်သောယောက်ျား: အမျိုးအစား-based HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးမှစိန်ခေါ်မှုများ။ AIDS နှင့်အပြုအမူ 12, 18-26 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Petterson, LJ, Dixson, BJ, Little က, AC, Vasey, PL (2015) ။ အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ cisgender Samoan အဘိဓါန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏အချိန်အတိုင်းအတာကိုကြည့်ရှုခြင်း မင်္ဂလာပါ ။ PLoS ONE 10, e0116529 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Raudenbush, SW, Bryk, AS (2002) ။ hierarchical Linear & Models: Applications ကိုများနှင့်ဒေတာများအားသုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ, 2nd edn ။ sage: တစ်ထောင်သပိတ် CA. [Google Scholar]
ဗေ့ခ်ျ, D ကို (2010) ။ ငါ transexual နဲ့ငါ့ဇနီးအပေါ်လိမ်လည်လှည့် - ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်းကို? (http://www.washingtoncitypaper.com/articles/40050/savage-love-i-cheated-on-my-wife-with-a-transexualmdasham) ။ 29 သြဂုတ်လ 2014 ဝင်ရောက်။
VanderLaan, DP, Ren, Z ကို, Vasey, PL (2013) ။ အဆိုပါဘိုးဘွားပတ်ဝန်းကျင်တွင်အထီး androphilia ။ လူ့သဘာ 24, 375-401 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Weinberg, MS, ဝီလျံ, CJ (2010) ။ transwomen အတွက်လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားယောက်ျား (MSTW): လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာဂျများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဆောက်လုပ်ရေး။ လိင်သုတေသန 47, 374-383 ၏ဂျာနယ်။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
1 Shemale အငြင်းပွားဖွယ်သက်တမ်းရှိ၏ ဒါကြောင့်မကြာခဏအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး (Arun အတွက်အထီး-to-အမျိုးသမီးလိင်လိင်လုပ်သားများမှသို့မဟုတ် GAMs ရည်ညွှန်းအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အချို့ကြောင့်ထောင်ချီရှာတွေ့ 2006) ။ မလိုလားအပ်သောပြစ်မှုနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှောင်ရှားရန်, ငါတို့အစား shemale များ၏အသုံးအနှုန်း GAM ကိုအသုံးပြုပါ။
2 ကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဖက်များ၏နံပါတ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် (GAM, အမျိုးသမီးနှင့်အထီး) ၏မည်သည့်အမျိုးအစားများအတွက်အများဆုံးအရေအတွက်ကဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်များ၏အချိုးအစားမမျှတသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် 25 ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဆုံးဖြတ်ချက်သိသိသာသာလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျား၏အထီးမိတ်ဖက်များ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်ကလျှော့တွက်။ အများဆုံးအရေအတွက်သည်ပေါ်မှာဤကန့်သတ်ဖယ်ရှားသောအခါသို့သော်ရလဒ်များကိုအလားတူခဲ့ကြသည်။